छोराका लागि आमाले देखेको एउटा सुन्दर सपना
क्रान्ति पराजुली - | २०७४ माघ २९ सोमबार
जब तिमी मेरो काखको ओछ्यानमा
मेरो पाखुराको सिरानी लगाई
ढल्किएर फिस्स मुस्काउछौ
मेरो मन हिमाल झै उज्यालो हुन्छ र म संसारकै सुखी मानिस झै हुन्छु,
छोरो, जब तिमी जन्मिएर तिम्री आमाले पहिलो पटक मायालु नयनले तिमीलाई स्पर्ष गरिन्, तब तिमीलाई रगतको आहालमा डुबेर जन्माउँदा लामो व्यथाले थिलथिलिएको शरीरका सारा व्यथा भुलेर हलुका भएको अनुभूति गरेकि थिइन् ।
आज पनि तिमी जब आधा रातमा भोकले चिच्याउन थाल्छौ, तिम्री आमाले दुई गिलास पानीमा माया घोलेर पिउछिन् र तिमीलाई सात धारा अमृत पिलाउँछिन् । यसरी तिमीलाई यस धर्तीमा एउटा मानव बनाएर उभ्याउने आमाका पनि केही सपना हुन्छन् भन्ने बुझ्ने भएपछि तिमीले थाहा पाउनेछौं ।
तिमीले तिम्री आमालाई नधिक्कार्नुकि, तिमीलाई अनेक पीडाले छट्पटाई रहेको रोगी देशमा जन्म दिएकी छे । थाहा छैन, तिमी स्कुल जाने बेलासम्म देश अहिले जस्तै रहला कि मैले र आम नेपालीले अहिले आशा गरे जस्तै स्थिरता र समृद्धितर्फ अघि बढ्ला । तिमीले अहिले जस्तै बेरोजगार हुनुपर्ने शिक्षा लिन वाध्य हुनुपर्ला वा संसारमा जहाँ गएपनि पछि पर्नुनपर्ने शिक्षा लिन पाउलाउँ । तिमी युवा हुँदासम्म अहिले जस्तै कंगाल देश भनेर संसारभरी नाक खुम्च्याइएला कि समृद्धिको उचाईमा उक्लदै गरेको देश भनेर सह्राना गरिएला, थाहा छैन ।
मेरो कामना छ, तिमी जवान हुँदासम्म देश अहिले जस्तो रहेनेछैन । तर, तिमीले इतिहास पक्कै पढ्नेछौं र देशको कहालीलाग्दो विगत थाहा पाउनेछौ । अभाव र गरिबीको विगत । हिंशा र अन्यायको विगत । अपमानको विगत । सम्पन्न वर्तमान भएपनि तिमीले हाम्रो देशको विगत गहिरिएर पढ्नु । किनभने, कहालीलाग्दो विगत पढेर मात्रै तिमीलाई उज्यालो भविष्यतर्फ अघि बढ्ने थप प्रेरणा मिल्नेछ ।
अहिले निकै लामो समयको युद्ध र आन्दोलनपछि संविधान बनेको छ र त्यस अनुसार सबै तहका निर्वाचन सकिएको छ । अब नेताहरुले भने जस्तै बारम्बारको सरकार परिवर्तन, अस्थिरता र कुशाषन हुनेछैन भन्ने आशा छ । स्थिर सरकार बनेपछि मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने र त्यसले तिमी र भावी पुस्ताको भविष्य सुन्दर बन्ने आशामा अहिले म र हामी नेपाली बाँचिरहेका छौं ।
तिमी जब बुझ्ने हुन्छौ, तब थाहा पाउनेछौं, गौरवपूर्ण इतिहास भएर पनि हाम्रो देशबाट लाखौँ तिम्रा दाई, काका, मामाहरु आफ्नो जवानी लिलाम गरेर विदेशी भूमिमा बेचिएका छन् । उनीहरु आफ्नो उर्जाशील जवानी, रगत , पसिना उतै बन्धक राख्न वाध्य छन् । तर, यस्तो कहालीलाग्दो वर्तमान भोगेर पनि उनीहरु सुन्दर भविष्यको सपना देखिरहेका छन् ।
अहिलेलाई मेरो सपना मात्रै हो, मैले जन्माएको सन्तान मेरै देशको नोकर बनोस् । तिम्रो जवानी विदेशमा बन्धक राख्नु नपरोस् । मेरो छोराको पसिना मेरै भूमिमा सिञ्चित होस् । तिम्रो पसिनाका थोपाहरुले मेरै माटोमा समृद्धि फुलाओस्, फलाओस् । तिमी जब जवान हुन्छौ, त्यो बेला नेपाल समृद्ध हुनेछ र यहाँको समृद्धि हेर्न संसारभरीबाट मानिसहरु आउनेछन् सपना छ, मेरो छोरा ।
तिमी जवान हुँदासम्म कालापानी, टनकपुर, कोशी बेचिएको र छिमेकीहरुबाट देश हेपिएको इतिहास मात्र रहला । गरिब र कमजोर हुँदा न हेपिनुपर्ने हो । सानो भएपनि सम्पन्न हुँदा देश सम्मानित हुन्छ भन्ने हामीले अनेक उदाहरण देखेका छौं । मेरो विश्वास छ, प्राकृतिक श्रोत र मानवशक्तिले भरिपूर्ण हाम्रो देश सधै यस्तै रहनेछैन । हामी किन सधै पछि रहिरहनेछौं र ? के कमि छ र हामीमा ? छोरा तिम्रो जवानीसँगै हाम्रो देश पनि सुन्दर र बलियो बन्दै जाने मेरो विश्वास छ ।
सिंगापुरलाई कायापलट गर्ने प्रधानमन्त्री लि क्वानलाई हामीले देखेका छौं । जनताको मन जित्न सके कुर्सीको लागि लडाईँ गर्नु पर्ने रहेनछ भन्ने सिंगापुरले देखाएको छ । देश अघि बढाउने नेतालाई जनताले नै कुर्सीमा पुर्याउने रहेछन् भन्ने त्यहाँ मात्र होइन, अनेक देशमा देखिएको छ । नेतृत्वमा ईच्छा शक्ति भएमा देश परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने अनेक देशहरुले देखाएका छन् । हाम्रो देशमा पनि अर्काे लिक्वान आउलान् कि ? मेरो विश्वास छ, त्यस्तो अगुवा पक्कै आउनेछन् यहाँ । योग्य र क्षमतावान नेता जन्माउन नसक्ने बाँझो धर्ति हो र हाम्रो ?
मेरो विश्वास छ, तिमी ठूलो हुँदासम्म पूर्व पश्चिम रेल बनिसक्नेछ । उत्तर दक्षिण रेल चलिसक्नेछ । त्यही रेलमा चढेर युरोप पुगिनेछ । त्यसबेलासम्म नेपाल बजार मात्र रहनेछैन । यहीका कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगहरु यहाँ खुलिसकेका हुनेछन् । यहाँका उत्पादन भारत, चीन, युरोप र अमेरिकासम्म पुग्नेछन् ।
काम खोज्न हामी बाहिर जाने होइन, बाहिरकाहरु काम खोज्न यहाँ आउनेछन् । काम गर्न जानेहरु पनि अदक्ष र अर्धदक्ष मजदूर हैन, सम्मानित काममा हुनेछन् । सुन्दर र सम्पन्न देश हेर्न भनेर लाखौं पर्यटक आउनेछन् ।
सानो भएर पनि विकशित हुनसकिन्छ भन्ने इजरायलले देखाइसकेको छ । विगत कमजोर र बिपन्न हुँदा पनि वर्तमान र भविष्य सम्पन्न र शक्तिशाली हुन्छ भन्ने विगत आधा शताब्दीमा गरिब देशबाट संसारकै शक्तिशाली बनेको चीनले देखाइसकेको छ । हामीले गरिब र कंगाल भनेर चिनेका अफ्रिकाका देशहरु हेर्दाहेर्दै सम्पन्न र शक्तिशाली बनेका छन् । हाम्रो क्षेत्रको श्रीलंका अहिले हामीभन्दा धेरै अघि बढिसकेको छ ।
छोरो, तिमी जवान हुँदा देश संसारका विकशित देशहरुसँग काँधमा काँध मिलाएर हिडिरहेको हुनेछ । आमा र हजुरआमाको पुस्ताले पाएको दुख सम्झेर देशलाई अरु अघि बढाउन प्रयास गर्नु । आफ्नो लागि मात्रै होइन, देशका लागि काम गर्नु । व्यक्ति मात्र सम्पन्न भएर कहाँ हुने रहेछ र ? संसारभरी अपमानित हुनुपर्नेरहेछ भन्ने तिम्रो आमा, बाबा र मामाहरुले भोगे । देश सम्पन्न भए न हामी सम्मानित हुने रहेछौं ।
अहिले अध्याँरो छ । तर, म उज्यालो भविष्यको सपना देखिरहेछु । नेपाल एक दिन पक्कै उज्यालो हुनेछ र तिमी त्यही उज्यालोमा चम्किरहेका हुनेछौं । मेरो भविष्य, मेरो छोरो ।
उही दुःखी आमा ।।